BALADWEYN-:Garoonka Kubadda Cagta Lamagalaay Magaalada Baladweyne Oo Dib Loo Furay | HobyoNet.Com
BALADWEYN-:Garoonka Kubadda Cagta Lamagalaay Magaalada Baladweyne Oo Dib Loo Furay
BALADWEYN–HOBYONET)Xaflad xarigga looga jarayay garoonka kubbadda cagta Lamagalaay ee magaalada Baladweyne oo dib loo furay ayaa lagu qabtay magaalada Balabweyn Ee xarunta Gobalka Hiiran..
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax oo xarigga ka jaray garoonka ayaa sheegay in dib-u-furista garoonka Lamagalaay ay sahlayso isdhexgalka bulshada gobolka Hiiraan.
Cabdifataax Xasan Afrax wuxuu tilmaamay in ay arrintaas suurtageliyeen ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Jabuuti ee ku sugan magaalada Beledweyne, kuwaasi oo muddo 4 toddobaad ah dayactir ku waday garoonka.
Cabdikariin Xasan Cabdulle oo ah guddoomiyaha xiriirka Olombikada gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa xusay in ay tani tahay fursad u billaabatay dadka ku nool Beledweyne, isla markaana ay gogol xaareyso in la soo xulo kooxdii matali lahayd gobolka Hiiraan.
Taliyaha ciidanka AMISOM ee gobolka Hiiraan Col. Cismaan Dubbad ayaa sheegay in howsha ay qabteen ay qeyb ka tahay xiriirka walaaltinnimo ee labada dal, isagoo dhallinyarada isboortiga u ballan-qaaday in ay siin doonaan qalab iyo agabka Sportiga taasna micnahedu ahayn in Amisom wax u qabatay ee ay dad walaalahoda u Qabteen ayuu intaa ku daray.
Garoonka Lamagalaay ee magaalada Baladweyne ayaa la sheegay in siddeeddii sano ee la soo dhaafay aanay ka dhicin wax tartamo ah.Balse hada ay fursad muhiima u tahay Shacabka reer Hiiran iyadoo ay baryihii U denbeeyay Magaalada ka Socdeen Dayactir dhinacyada dhismoyinka iyo Xaruumaha Dowlada ah